Yiziphi Izinkambiso Zokusebenza Kwezezimali Eziphumelelayo?
Ukufuna indlela elula yokuthola amagama angukhiye afanele okuqukethwe kokuqukethwe? Ungaqapheli ngaphezu kwalesi sihloko! Namuhla, sizokutshela ukuthi singakwenza kanjani ukusebenza kwe-SEO yendawo ebiza izindleko ngokusebenzisa amathuluzi wedatha asebenzayo we-SEO.
Uma usuphethe ukwenza izinto eziyisisekelo, unamathele ekuhambeni okufanayo komsebenzi kunoma yiziphi izinlimi ezisele noma izinguqulo zezwe ofuna. Ngakho-ke, ake siqale.
Umhlahlandlela wezinyathelo ezingu-7 ku-SEO Ephumelelayo Indawo:
Ukuthuthukisa I-Text Text ye-SEO Indawo
) Ochwepheshe be-Semalt batusa ukuthi ulandele lezi zinyathelo uma ulungiselela umbhalo womthombo we-SEO endaweni yangakini:
Ukuqinisekisa ukuthi ukukhulunywa kwegama elingukhiye kungaphansi kwe-2. 5%;
Kufaka ikhophi ezihlukahlukene zamagama angukhiye nezihloko;
Kufaka kukhophi lakho wonke amagama angukhiye afanele ebhizinisini lakho.
Lesi sinyathelo sidinga ukuba uhambe nombhalo wakho womthombo bese ukhipha imigomo eyinhloko, kufaka:
Cabanga ngokudala i-Source-Language Termbase )
Amagama angukhiye womkhiqizo;
Amagama angukhiye womkhiqizo / wenkonzo nazo zonke izilinganiso ezikhona;
Amagama angukhiye ekwaziswa, kufaka phakathi izici zomkhiqizo, izinkinga, izixazululo, nama-FAQ;
Izenzi, izichasiso nezandiso ezibonisa ibhizinisi lakho;
Amagama angukhiye e-Transactional.
Uma usuqedile lokho, bhalisa yonke imibhalo ekhishwe bese udala i-termbase. Bese uhlukanisa amagama angukhiye owatholile ukuze ukwazi ukuwaxhuma kuma-equals afanayo kamuva.
Yenza i-Complex Igama elingukhiye Ucwaningo
Lokhu kuvame ukuqhutshwa ngokufaka izihloko ezifanele ngolimi olubhekiswe emigameni yolwimi. Ungangeza izihloko ezengeziwe ezixhunywe enkonzweni yakho kanye namagama angukhiye okubhaliselwa kanye nokuphambuka okuvamile. Ngemuva kokungeza, qedela uhlu lwakho lwezincomo. Ochwepheshe be-Semalt basikisela ukusebenzisa ithuluzi leChofozaStream ukuhlaziya izintando zokusesha. Enye into okufanele uyenze icela isikhulumi esivela emdolobheni ukukusiza uthole umdlalo phakathi kwenani eliphakeme lemithombo yomthombo nalabo abasanda kutholakala.
Qhathanisa amagama akho angukhiye
. Tshela abomdabu ukuthi bakhethe isikhathi esicwaningwe kakhulu uma kunezinketho eziningi. Uma kwenzeka ukuthi kube nomdlalo oyingxenye, cela umdabu ukuba ahlukanise igama elingukhiye elibhekiswe emagama amaningi, bese uhambelana.
Sesha i-Translator ngamathuluzi we-CAT
Amathuluzi we-CAT avumela abahumushi ukusebenzisa i-termbase ngesikhathi sangempela ngesikhathi sokuhumusha. Banikeza i-term efanele kusukela ku-termbase njalo lapho kwenzeka kumbhalo womthombo. Ngaphezu kwalokho, la mathuluzi anemibuzo nezimpendulo ezakhelwe ngaphakathi ezenza kube lula ukuhlola ukuthi ukusetshenziswa kwethemu kulungile noma kubi.
Namuhla, i-proz. i-com ibhekwa njengenye yezinkomba zokuhumusha ezinkulu kakhulu. Ivumela abasebenzisi ukuthi bacacise izidingo zabo zamathuluzi e-CAT kuphanda. Ukucacisa ukufometha kwefayili ye-termbase kuyaphakanyiswa kakhulu ngoba abahumushi abaningi bangahlola ukuthi kulula kangakanani noma kunzima kangakanani ukungenisa ifayela elikhethiwe ku-CAT ithuluzi abasebenzisa.
Bhala isabelo sombukiso wesibonakaliso
ngokushesha nje lapho uthola ukuhumusha ngemigomo nemishwana ebalulekile isikhathi sokudala isabelo sombuki wokuhlola. Inhloso yesabelo ukuqinisekisa ukuthi isitayela sombhalo ohlosiwe kuyimvelo, futhi yonke imigomo esemqoka ekuhumusheni ibhalwe futhi ihambelana ngendlela efanele.
Ukugcina kwe-SEO Tune Up
Isinyathelo sokugcina siphelele ngokuhlela umbhalo ohlosiwe futhi ungeze amanye amagama angukhiye angaphilile kusuka efayela, lapho kudingeka khona. Futhi, thola ulwazi lwe-NAP nomklomelo we-schema. Yilokho kuphela.
Uneminye imibono yokuthi ungayenza kanjani imali yokwenza indawo ye-SEO? Zizwa wamukelekile ukuze wabelane nabo ngeqembu le-Semalt Source . Sithanda njalo ukuzwa kusuka kubafundi bethu!